Ogaden News Agency (ONA) – 2016 – July
Maanta oo Jimce ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 29/7/16 waxaa magaalada Pretoria ee xarunta wadanka S. Africa kadhacay shir balaadhan oo ay kasoo qayb galeen […]
July 29, 2016 / Warar	/
Daawo: Muxaadarada Todobaadka & Sheekh Bashiir Shiil.
Waxay bahda Wakaalada Wararka Ogadenya ee ONA idiin soo gudbinaysaa Muxaadaradii todobaadlaha ahayd eed nooga barateen taasoo aan maalin kastoo Jumce ah idiin soo gudbino. […]
OYSU Yamen oo Shirkoodii Todobaad Laha ahaa U Qabsoomay.
Waxaa ka dhacay Caasimada Wadanka Yamen ee Sanca Shirkii todobaad laha ahaa ee ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenia ee OYSU , waxaana lagu qabtay […]
Dagaallo Culus oo Dhexmaray Ciidanka Oromiya (OLF) & Gumaysiga Itoobiya.
Wararka ka imanaya wadanka Oromia ee ay Itoobiya gumaysato ayaa sheegaya in uu dagaal culus Gobolka ku dhex maray ciidanka Jabhada Xoraynta Oromia (OLF) iyo kuwa […]
Ciidanka Gumaysiga oo Shacabka Gonder Cadaadis Saaray & Arintoo Kasii Dartay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay ciidamada wayaanuhu kawadaan howl gal kadhan ah dadka shacabka ah ee kasoo […]
Wadanka Taliyaaniga oo Bilaabay Olole Lagaga Hortagayo Tahriibka.
Xukkumada Talyaaniga ayaa bilawday olole ay uga hortagayso dadka ka soo haajiraya waqooyiga iyo galbeedka Afrika ee isku dayaya inay doon ku imaadaan badda si […]
July 29, 2016 / Warar, Wararka Yurub	/
Daawo: Madaxweyne Barack Obama oo Si Wayn U Taageeray Hillary Clinton.
Madaxweyne Barack Obama ayaa khudbad qiiro leh oo lagu taageerayo murashaxa xisbiga Dimuquraadiga Mrs. Hillary Clinton kasoo jeediyey shirweynaha xisbigaasi ee ka socda magaalada Philadelphia. […]
July 29, 2016 / Amerika, Warar	/
ILAYS TV 29 July 2016 Kadaawo Barnaamij xiisa badan
July 29, 2016 / ILAYS TV, Warar	/
Daawo: Muuqaaladii Ugu Dambeeyey Mudaaharaaka ka socda Borane Oromiya
July 28, 2016 / Warar	/
Marka Xigga Dushuu Idinka Rari Sida Dameeraaye – Noor Afgaab
Ugu horeyn Ilaahaybaa wax dila waxna nooleeya, qof walbana intuu dunida dul joogayo horuu Ilaahay u qadaray. Siduu u dhiman iyo halkuu ku dhimana Ilaahay […]
July 28, 2016 / Maqaalo	/
Maxaad Kala Socotaa Xaalada Gobolka Afdheer Ee Wadanka Ogadenia?
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Afdheer ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya in guud ahaan gobolka ay kajiraan dhibaatooyin badan oo ciidanka gumaysigu ugaysanayaan shacabka ku dhaqan Gobolka Afdheer, Xog rasmi […]
Daawo: Getajow Asafa oo Naftiisa Ubaqay Iyo Khal khal Wayaanaha Soofood Saaray.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee caasimada Gumaysiga ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada sirdoonka ee wayaanaha uu soo food saaray khal khal kusaabsan nolashiisa oo […]
Jaaliyada soomaalida ogaadeeniya ee magaalada Winnipeg ,Canada oo Shir muhiim ah isugu timid.
Waxaa maanta oo taariikhdu tahay 27 July 2016 Shir muhiim ah isugu yimid dhamaan xubnaha jaaliyada soomaalida ogaadeeniya ee magaalada Winnipeg dalka Canada . […]
Daawo: Mudaaharaad Ka Dhacay Gobolka Borana ee Deegaanka Oromiya.
Mudaaharaad balaadhan oo ka dhacay tuulada Boku Luboma oo katirsan Degmada Miyo ee Gobolka Borana oo ku taala dhulka Oromiya ayaa waxay ciidanka Woyaanuhu ku […]
Xisbiga Dimuqraaddiga, ayaa si rasmi ah u magacaabay in xog-hayihii hore ee Arrimaha Dibadda Hillary Clinton ay noqoto musharaxa madaxtinnimo ee xisbigaasi u matali doona […]
July 28, 2016 / Amerika, Warar	/
Xil-Dhibaan Horay Uga Mid Ahaa Baarlamaanka Somaliya oo Fuliyay Qarax Ismiidaamin Ah.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in Xil-Dhibaan horey oo lagu magacaabo Saalax Badbaado oo kamid ahaan jiray Xildhibaanadii Baarlamaanka KMG uu ahaa ninkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee […]
Dag Dag: Daawo Ciidanka Gumaysiga oo Rasaas Nool Shacab Kuridaya.
Wararka ka imaanaya Gobolka Oromia Gaar ahaan magaalada Boku Luboma ayaa waxay sheegayaan in shacabka oo wada Mudaaharaad Si nabad ah in Ciidamada Gumaysiga Ethiopia […]
July 27, 2016 / Warar	/
Xiisad Cusub oo Dhulka Oromia Kataagan & Ciidamo Loo Daad Gureeyay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Oromia ayaa sheegaya in ay halkaas kataagantahay xiisad aad uculus kadib markay xukuumada Wayaanuhu u dirtay Gobolkaas ciidamo aad ubadan oo loogeeyay in ay damiyaan […]
Ciidamada Wayaanaha (Gumaysiga Itoobiya) oo Tacadiyo Kagaystay Somalia.
Kadib fashilo isdaba joog ah oo ciidamada wayaanaha kasoo wajahay gudaha iyo dibada wadanka waxaa meel xun gaadhay wada shaqayntii hay’adaha dowliga ah ee wayaanaha iyo lashaqayntii dowladaha aduunka oo […]
Daawo: Madaxweyne Kuxigeenkii Koonfurta Sudan oo Markale Xilka Laga Qaaday.
Madaxweyne kuxigeenka dalka Suudaanta Koonfureed ahaana hogaamiyaha Mucaaridka Riek Machar ayaa xilkii uu hayey laga xayuubiyey kadib markii lawaayey meel uu ku sugan yahay. Riek […]
July 27, 2016 / Afrika, Warar	/